ဝါးခယ်မ : Red Waves Fan Club ၏ ပထမအကြိမ် ကုသိုလ်ပြုပွဲ အကြောင်းကြားခြင်း
Red Waves Fan Club ၏ ပထမအကြိမ် ကုသိုလ်ပြုပွဲ အကြောင်းကြားခြင်း
Red Waves EC များ Red Waves Member များ ဧရာဝတီပရိသတ်များ သို.
၁ ။ ကျွန်တော်တို. Red Waves Fan Club အနေဖြင်. ဧရာဝတီ ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း၏ အောင်မြင်မှုအတွက် ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ ၊ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အားပေး ကူညီ ရန် အသင်းကို အစဉ်အဆက် အားပေးလာကြသူများ စုစည်းထူထောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂ ။ ထိုမူလရည်ရွယ်ချက်တို.အပြင် RWFC-EC တို.၏ မေဒေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ အနက် ပရဟိတ လုပ်ငန်းများတွင် တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Red Waves Member များ အသင်းကစားသမားများနှင်. စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူနှင်.မဆို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဟူသော အချက်တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။
၃ ။ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် ၂၀၁၃ မေ-ဇွန်-ဇူလိုင် ၃လဆက်တိုက် ပရဟိတ ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှု ၊လှုဒါန်းမှုတို. ပြုလုပ်ပါမည် ။ ထို၃ခုအနက် ၂၀၀၃ မေ နှင်. ဇွန်တွင် ပြုလုပ်မည်. အစီအစဉ်များကို အခြား တစ်ဖွဲ.စီနှင်. ပူးပေါင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး တတိယအကြိမ်မြောက် ပြုလုပ်မည်. ပွဲတွင်မူ Red Waves မှ ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၄ ။ပထမဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် မြန်မာအွန်လိုင်းတီးရှော့မှ မန်ဘာများ မှ ၂၄. မေ လ .၂၀၁၃ ခုနှစ် ( မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄-၁၃၇၅ ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်နေ့ ၊ သောကြာနေ့) တွင် ဦးဆောင်ပြုလုပ်မည်. မြောက်ဒဂုံ သုခရိပ်မြုံပရဟိတ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဂေဟာ အလှု ၌ ပူးပေါင်းပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။(ဒုတိယမြောက် အစီအစဉ်အတွက် လည်းရွေးချယ်ပြီးဖြစ်ပါသည်)
၅ ။ထို.ကြောင်. Member များအပါအ၀င် စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါသည် ။အလှုငွေထည်.၀င်လိုသူများအနေဖြင်. RWFC အတွင်းရေးမှုး မေစိုးပိုင်ဦး ဖုန်းနံပါတ် (၀၉- ၄၃၁၀၇၉၈၄)သို.ဆက်သွယ်ပါဝင်လှုဒါန်းနှိုင်ပါသည် ။(ကစားသမား များဆီမှ အလှုငွေအားလုံး လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။)
၆ ။ ထို.အပြင် ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါလိုသော Red Waves Member များ Member မဟုတ်သေးသူများလည်း အတွင်းရေးမှုးထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ။ (အခြေအနေပေးပါက ထိုနေ.တွင် ကစားသမားအချို.ပါ Red Waves Member များနှင်.အတူ တက်ရောက်ပါမည် ။
၇ ။Red Waves EC များအနေဖြင်. EC Sport Shirt - Member များအနေဖြင်. Red Waves T-Shirt များ ( မဖြစ်မနေ ) ၀တ်ဆင်လာပါရန် နှင်. Member မဟုတ်သေးသူများ သင်.တော်ရာ ၀တ်ဆင်လာနိုင်ပါသည်။
၈ ။မြန်မာအွန်လိုင်းတီးရှော့မှ စီစဉ်ထားသော အလှုအစီအစဉ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ မန်ဘာများထံမှ ရရှိသော အလှူငွေများအား စုပေါင်းပြီး ကလေးငယ်များအတွက် တနေ့စာ အစားအသောက်စရိတ် လှူပြီး ကျန်ရှိသော အလှူငွေများအားလုံးကုို ဂေဟာတွင် လိုအပ်နေသော ဆေးဝါး ၊ အဝတ်အထည် နှင့် အသုံးအဆောင်များ လှူဒါန်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
က . ဂေဟာရှိ ကလေးများအတွက် တနေ့စာ ထမင်းဟင်းဖိုး အလှူငွေအားဂေဟာမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံပေးအပ်ရန်
ခ . ကလေးများအတွက် သယ်ဆောင်သွားသော ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးများ နှင့် ကလေးငယ်များအတွက် အဝတ်အထည်များလှူဒါန်းရန်
ဂ . 10:00 တွင် ဂေဟာရှိကလေးငယ်များနှင့်အတူ mmteashop2နှစ်ပြည့် ကိတ်မုန့်ခွဲရန်
ဃ . မန်ဘာများမှ ကလေးငယ်များအား ကိတ်မုန့်ကျွေးရန်၊ ထို့နောက် ကလေးများနှင့် ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်း၊ ကဗျာရွတ်ခြင်း၊ ပုံပြင်ပြောပြခြင်းများ အလျဉ်းသင့်သလို လုပ်ဆောင်သွားရန်
င . 11:15 နောက်ဆုံးထား၍ တီးရှော့မန်ဘာများမှ အခမ်းအနားအဆုံးသတ်ပေးပါရန်နှင့် ထို့နောက်တွင် မြန်မာအွန်လိုင်းတီးရှော့၏ မန်ဘာများအတွက်
အထူးအစီအစဉ် အခမ်းအနားတစ်ခုရှိပါသဖြင့် ထိုအထူးအစီစဉ်အား မန်ဘာများအားလုံး organizer team နှင့်အတူ ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ရန်
၉ ။RWFC အနေဖြင်.အလှုငွေနောက်ဆုံးလက်ခံမည်.ရက်မှာ ၁၆ ရက် ၅လ ၂၀၁၃ နေ.ညနေဖြစ်ပါသည် ။ လိုက်ပါလိုသူများလည်း ထိုနေ.ညနေ နောက်ဆုံးထား ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
RED WAVES Fan Club
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 10:45 AM
Labels: Ayeyawady United FC
Zune Thin Zar ဇွန်သဉ္စာ နောက်တစ်ဆင်. တက်ပြန်ပါပြီ
ပထမဆုံး တောင်းပန်ချင်တာက ဒီအမြင်မတော်တဲ့ပုံ တွေကိုကြည်.မိတဲ့အထဲ အသက်အားဖြင်./ ပညာအားဖြင်./ဂုဏ်အားဖြင်. လေးစားထိုက်သူ များ အမ / ညီမ ...
Google စနစ်တကျ သုံးနည်း လမ်းညွှန်
ပြည်တွင်းရှိ ကျောင်းသားများအတွက် Google သည် မရှိမဖြစ် အရာတစ်ခုဟုသာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကျောင်းသားအများ...
Viber ထဲက ဖျက်ပြီးသား Message များ ပြန်ယူနည်း
Viber မှာ တခါတလေ နမော်နမဲ့နဲ့ အရေးတကြီးမက်ဆေ့တွေကို ဖျက်လိုက်မိတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုး ကြုံဖူးမှာပါ။ ကိုယ့်ကောင်မလေးပို့လိုက်တဲ့မက်ဆေ့ကို မ...